Namhlanje e-Apple, iwebhusayithi ka-Apple kwimicimbi yakho yasesitolo | Ndisuka mac
Namhlanje eApple, iwebhusayithi yeApple yeziganeko zakho ezigciniweyo
I-Apple iyaqhubeka nokuzimisela ukuba abasebenzisi bayo bonwabela ngakumbi iivenkile esele zisasazekile kwihlabathi liphela kwaye ngexesha lasemva kwemini elixakekileyo inkampani isungule iwebhusayithi yayo ethi "Namhlanje eApple" ukubona nganye yeeseshoni zoqeqesho ezifundiswayo. kwiiVenkile zeApple kwihlabathi liphela, oko kukuthi, indawo ethile kunye neendawo ezizinzileyo zokubona nganye yezi seshoni iApple ibiqhuba ezivenkileni zayo ixesha elide kodwa ngoku zilawulwa kwindawo enye okwenza kube lula ukuba umsebenzisi afumane iVenkile yeApple ekufuphi kwaye azimase umsitho.
#NamhlanjeApple phila kwihlabathi jikelele kule mpelaveki! Iiseshini ezingama-4,000 zemihla ngemihla, zasimahla kwaye zivuleleke kuwo wonke umntu, yonke imihla. https://t.co/NMAVfZrdT3 pic.twitter.com/q2j7ahvmoH
-Angela Ahrendts (@AngelaAhrendts) Meyi 16 ye2017
Namhlanje eApple ivela kwiphepha langaphambili le- iwebhusayithi yenkampani kwaye kunokwenzeka ukuba kwezinye iivenkile kwihlabathi liphela iinkomfa zibanjwa ngamagcisa aziwayo okanye angaziwayo kodwa banetalente yokwabelana ngezimvo zabo kwaye batyebise abanye abasebenzisi. Ngokucacileyo eli candelo lewebhu liyasebenza nokwazi iishedyuli, ubhalise kwaye wonwabele iikhosi eziqhelekileyo zeApple kwisoftware nakwisixhobo sehardware.
Ngamafutshane, imalunga nokongeza amava kunye nokufunda ukwenza uninzi lwezixhobo zethu kwaye kule Apple yinto ephambili. Ukubhalisela iiseshoni kuyimfuneko ukuba ube ne-ID ye-Apple kwaye ngokucacileyo ivenkile ekufuphi, emva koko kulula njengokuvela kwindawo yokuqeshwa kunye nokonwabela oko U-Angela Ahrendts, uchaza njengo:
Ingcinga yale mihla yesikwere sedolophu apho wonke umntu amkelekile kwaye apho sinikezela ngeyona nto intle ngeApple ukunxibelelana nabanye abantu, ukufumanisa ukuthanda okutsha kunye nokuthatha izakhono inyathelo elinye ukuya phambili.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Ndisuka mac » iapile » Namhlanje eApple, iwebhusayithi yeApple yeziganeko zakho ezigciniweyo
I-Todoist yeMac ihlaziywa ngoyilo olutsha kunye nokudityaniswa kweKhalenda kaGoogle